Thursday December 24, 2015 - 00:54:12 in Wararka by Xarunta Dhexe
Munaasabad balaaran oo lagu weyneenayo xuska dhalashada Xabiibulaahi Maxamed (NNKH) ayaa lagu qabtay masjidka Sheekha caanka ah ee Soomaaliyeed Sheekh C-raxman Seylici ee magaalada Muqdisho degmada Kaaraan. 00
Munaasabada ayaa culimadi kasoo qeybgashay ugu horeyn waxey uga hadleen siirada Nabiga iyo muxaadarooyin ku tacaluqa dhamaan fadliga ee leedahay bishaan Mowliid iyo sida ee umada musliminta kaga faa’iideesan karaan fursadaan qaaliga ah.
Sidoo kale waxa qasiidooyin macaan badan halkaa ka aqrinayay qaar kamid ah qaa’idiinti kasoo qeybgashay iyadoo kasoo qeybgalayaashi xaflada ee aad umacaansadeen siirada iyo madaa’ixdi kale ee halkaa lagu soo bandhigay .
Qaar kamid ah dadki kasoo qeybgalay oo la hadlay Shabakada Warsheekh ayaa sheegay iney si aad ah ugu riyaaqeen munaasabadaani iyagoo Alle ka baryay inuu udaa’imo kulamada nuucaan ah oo qalbiga bani aadamka uu ka helo qushuuc iyo naxariis.
Waa Bahda Shabakada Warsheekh oo isku duuban oo idin leh Eebe hanagu kulmiyo kulamada nuucaan ah .
Xafiiska Shabakada Warsheekh ee Muqdisho